‘गान्धीवादी’ सीके राउतको हिंसात्मक अवतरण : गुलाबको फूलदेखि भाटासम्म ! - Sano Aawaj
६ कार्तिक २०७८, शनिबार by sanoaawaj
जनमत पार्टीका नेता डा. सीके राउतले आफूलाई गान्धीवादी, अहिंसावादी एवं शान्तिप्रेमी बताउँदै आएका छन् । तर, विहीबार जनकपुरस्थित खानेपानी डिभिजन कार्यालयका कार्यालय प्रमुख जागेश्वर कुशवाहालाई कालोमोसो दलेर बजार घुमाएपछि राउतको ‘गान्धीवाद’ माथि प्रश्न उब्जेको छ ।नेपालबाट मधेसलाई अलग गर्नुपर्छ भन्ने अभियान सुरु गरेर चर्चामा आएका सीके राउत ओली सरकारसँग सम्झौता गरेर मूलधारको राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा छन् ।
उनले राष्ट्रिय जनमत पार्टी गठन गरी राजनीतिक गतिविधि गर्दै आएका छन् ।
यसअघि राउतले आफ्ना कार्यकर्तालाई महात्मा गान्धीको उदाहरण दिँदै अहिंसावादी आन्दोलन गरेर पनि आफ्ना एजेण्डा स्थापित गराउन सकिने बताउने गरेका थिए ।
राज्यले जति दमन गरे पनि प्रतिकार नगर्न उनले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिने गरेका थिए । तर, विगतमा आफूलाई गिरफ्तार गर्न आउने प्रहरीललाई समेत गुलाबको फूल दिएर स्वागत गर्ने सीके राउत र उनका कार्यकर्ताले हिंसात्मक गतिविधि सुरु गरेका छन् ।
Posted in Breaking news 1, Nepse Update, ट्रेन्डिङ, राजनीति, व्यक्तित्व
Prevखुकुरीले श्रीमतीको घाँ टी का टे श्रीमानले,खाना ढिलो बनाएको भनेर मा रेको हुँ भन्छन् ।अचम्म !
Nextमहिनौं देखि ५ बर्षीया बालिकामाथि यौन शोषण, ५१ वर्षिय उपप्रध्यापक पक्राउ